जीवनमा कसरी खुसी रहने? यस्ता छन् १४ उपाय - Mero Khabar Nepal
घुम्ने जाने साथी पाइराख्नुभएको छैन ? त्यसो भए एक्लै गइदिनुस्। एक्लै घुम्न जानुहुन्न भनेर कसले नियम बनाएको छ र ? आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट जानुस्, फिल्म हेर्न गइदिनुस् र आफूले जान चाहिरहेकोे ठाउँमा जानुस्। यदि तपाईं सामाजिक हुनुहुन्न भने आफू एक्लै भए पनि यस्ता क्रियाकलाप गरेर रमाउनुस्, यसले खुसी मिल्छ।
Prevयो दिशामा बिर्सेर पनि सिरानी लगाएर नसुत्नुहोस , घरमा अशुभ हुन्छ
Nextपुष्प संग साम्राज्ञीको हट ठुम्का ( फोटो फिचर )